Sudaan lafti Hidha Abaayya kooti jette ! UN maal yaada jira? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSudaan lafti Hidha Abaayya kooti jette ! UN maal yaada jira?
Sudaan lafti Hidha Abaayya kooti jette – UN maal yaada jira?
Lammummaan Itophiyaa akka bara kanaatti salphatee, tuffatamee hinbeeku…
Dargaggeeyyiin kunniin baqattoota mana hidhaa Saawud Arabiiyaa keessa jiraniidha. Akkuma argitan qullaa isaaniiti..
Erbee ofirra buusan hinqaban…
Dhimma Satellite Ethiosat
Dhimma Ethiosat satelayitii haaraa mootummaan Itoophiyaa bitatee midiyaalee biyya keessaa hunda gara satellite kanaatti dabarsaa jiruun wal qabatee gaaffillee hedduutu nu qaqabaa jira.
Wanti dalagamaa jiru miidiyaalee faallaa mootummaa dhabbatan qilleensa Itoophiyaa keessaa qulqulleessuuf kan hojjetamaa jiru ta’uu isaa akka bartanii feena. Biltsiginnaan Ji’atti qarshii Dollaara Miliyoona 10 kaffaluun satellite mataa isaanii bitanii jiru. Yeroo dhiyootti keessatti miidiyaaleen Oromoo walittii dhufnee murtii irra geenye isini beeksifna. Hagasitti nuuf Obsaa.
Haa badan sagalee Oromoo ugguruun hin danda’amu.
1. Warannii ABUT fi Abiy itti fufe
-Nanno Hawuzeenitti kutaa waraana tokko barbada’e
– Maqalee qarshii galchuu malee baasu hin danda’mu
– Dura taa’an dandii qillensa Itophiya qabame
2. Olma Oromiyaa
– Buufanni Sandaafa gubate
-Lammaan baafa haaran maalif as bahe
-Manni marii Beenishangul nama afur irraa mirga himatamu kaase
3.Lolli Sudaani fi Tophiyaa oo’e
Sudaan lafti Hidha Abaayya kooti jette
– UN maal yaada jira?
Jawar Mohammad biyya kanaaf gar-malee yaadda’aa waan tureef boqannaa dhabee ture. Amma garuu yeroof hidhamuu isaatiin boqannaa argatee jira. Itiyoophiyaan garuu guyyaa Jawaar hidhame irraa kaasee boqannaa dhabdee boossee boossee imimmaan fixattee dhiigaa boo’aa jirti. Warri afaaniin Itiyoophiyaan hin diigamtu jechaa turanis hojiidhaan diiganii nutti argisiisanii jiru. Warri yoo Jawaar hidhame Itiyoophiyaan ni boqatti jechaa turan san har’a ofitti saalfatanii sagalee dhokfatanii badanii jiru. Bu’aa Ashaboo(Soogiddaa) yoo bushaa’e baru jedhan. Namuu amma dhugaan eessa akka jiru argee jira. Yaa rabbi nama jabaa kana ammumatti harka zaalimaatii nuuf baasi
Jawar Mohammed n malee duunee argamana warri jechaa ture manati gallani teenyaan, guyyaa tokkos haa taatu gurbaa kana waliin waa’ee siyaasaa impaayeera Itoophiyaa mari’adheera, maal jedheen mana taa’a yaada jedhuun gurbaa keenya mana hidhaa dhaqani gaaffataniru oduu jedhuutu dhagahama, obbo Lidatuu Ayyaaloo. Wanta kana gochuu isaanitiif, anaaf warra akka kootti yaadan bira galata danuu qabu obbo Lidatuun. Galatoomi ittiin jenna!!!